China Rogers Pcb Shenzhen Pcb Umenzi Shenzhen Manufacturer Electronic High Frequency Rogers 4003c / Rogers 5880 / Rogers 4350b Pcb iBhodi abavelisi kunye nabathengisi | PhiliFast
Ubungakanani bePCB: Ubukhulu: 96 * 110mm Isilikhi: mhlophe
I-PHILIFAST isekwe njengomenzi we-PCB okhokelayo kunye nomthengisi, iimveliso zigubungela zonke iintlobo ze-PCB, ngakumbi ii-pcbs ezihamba rhoqo, sinezinto ezaneleyo zokuhamba rhoqo kwisitokhwe sethu.
Senza ngokwezifiso ukwahluka kwee-Rogers pcbs zabathengi bethu kwihlabathi liphela, umzekelo, ezinye ii-PCB ezihamba rhoqo kwizicelo zokhuselo, ezomkhosi, ezingenazingcingo, zonxibelelwano, kunye nemizi-mveliso yeemoto.
Isicelo ikakhulu kubathengi bethu yiRogers PCB.
Izinto zeRogers PCB Esinazo eStock
1. I-5G ye-Microwave RF ibhodi yokuhamba rhoqo
2. IBhodi yeRF HIGH-SPEED HIGH-RQUQUENCY Board
3. Ukuhamba rhoqo kwe-5G ye-Antenna PCB
4. IBhodi yeSekethe yoNxibelelwano lweMicrowave
5. IBhodi yeSekethe yoLawulo yeRF
6. Amandla Splitter Board
1. Sisebenzisa iRogers, iTaikangli, iYalong, iWangling kunye nezinye izinto zokwenza uphawu ukwenza iibhodi ezihamba rhoqo, kwaye sixhotyiswe ngabasiki bezinto zokugaya ukunciphisa i-burrs.
2.Sebenzisa izixhobo zokulungisa iplasma ukukrola i-via kunye nomphezulu ukwandisa ukubambelela kumngxunya we-PTH umngxunya kunye ne-inkki yemaski.
3. Inkqubo yemveliso ilawula ngokuchanekileyo ubungakanani be-dielectric ubukhulu, ubukhulu bobhedu, ububanzi bomgca kunye nokushiya umgca, kunye ne-solder mask ink-thickness ukuqinisekisa ukuba ixabiso le-solder mask liphakathi kwendlela yokunyamezela.
Isampula yexesha lokuKhokela Imveliso Mass ixesha phambili
I-PCB engatshatanga 1 ~ iintsuku ezi-3 Iintsuku ezi-4 ~ 7
I-PCB yamacala amabini 2 ~ 5 yeentsuku 7 ~ iintsuku ezili-10
Multi-maleko PCB Iintsuku ezi-7 ~ 8 Iintsuku ezili-10 ~ 15
Indibano yePCB Iintsuku eziyi-8 ~ 15 Iiveki ezi-2 ~ 4
Ixesha lokuzisa Iintsuku ezi-3-7 Iintsuku ezi-3-7
1.Uku-odola okuncinci, sihlala sisebenzisa ukuhambisa i-EXPRESS ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwangexesha. Njenge-FedEx, i-DHL, i-UPS, i-TNT, i-EMS, imigca yabucala, njl. Yonke into yokuhambisa iya kuba ngexesha ngaphandle kokulibaziseka okukhulu.
2. Kwimveliso yobuninzi, sihlala sisebenzisa ukuhambisa ngolwandle ukugcina iindleko zakho.
3. Kananjalo, ukuba unokutyumba owakho umhambisi phambili, singathumela iimpahla kumphathi wakho.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu 4L FPC Flex PCB IBhodi Flexible Ishicilelwe Circuit IBhodi OEM Ukubumba Kwaye Indibano ETSHAYINA CHINA
Okulandelayo: China Electronic Ishicilelwe Pcb Circuit IBhodi kwemifanekiso Pcb SMT THT Assembly Service Prototyping kunye neMveliso Mass ezixhaswayo
FR4 94v0 SINGLE-emacaleni ENIG WESEKO IBHODI PCB FA ...